प्रियंका कार्कीको छोरी जन्मियो, फाइदा भो क्रिकेट क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ! - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / प्रियंका कार्कीको छोरी जन्मियो, फाइदा भो क्रिकेट क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ललाई !
बिहिबार, असोज ०७, २०७८	, खबरनेपाली संवाददाता
भन्नलाई त भनिन्छ कि कसैको सफलता र असफलताको कारण व्यक्ति आफु स्वयम् हुन्छ तर सँधै यस्तो हुदैन । कहिलेकाँही कसैको सफलता र असफलताको तार कहिले अचम्मले अन्तै जोडिन्छ । यो संयोग देख्नेलाई पनि चकित बनाउने किसिमको हुन्छ भने सफलता भोग्नेलाई कति रमाइलो हुन्छ होला ? हामी अनुमान गर्न सक्छौँ । अरुको कर्म वा अरु कुनै घटनाको कारणले त्यससँग बिल्कुलै असम्बन्धित व्यक्तिले फाइदा लिनु, त्यो पनि कुनै प्रयास बिना वास्तवमै रमाइलो संयोग हो ।
यस्तै एउटा संयोग हामीले केहि अगाडी नेपालको रियालिटी सो नेपाल आइडलमा पनि देख्न पाएका थियौँ । त्यहाँ भएको के थियो भने अमित बराले एउटा गीत गाए, त्यो गीत थियो, पंक्षी जसलाई गाएका थिए पुष्पन् प्रधानले । पुष्पन् प्रधानले मिठा गीत गाएका भए पनि कहिलै पनि लाइमलाइटमा परेका थिएनन् तर नेपाल आइडलमा जब अमित बरालले उनको गीत गाइदिए अनि सो गीत सुनेर इन्दिरा प्रसाइँ निकै रोइन अनि पुष्पन प्रधानको जीवनले कायापलट गर्यो । एकाएक पुष्पन प्रधान गीत संगीतमा व्यस्त बनेँ । आम्दानीको स्रोत बढ्यो । पुष्पन प्रधानले सोच्दै नसोचेको कारणले सफलता हाशिल गरे ।
भर्खरै यस्तै फरक कुरा भएको छ । तपाईले शिर्षक हेर्दा थाहा सक्नु भयो कि प्रियंका कार्कीको छोरी जन्मियो, फाइदा भो क्रिकेट क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ! कसरी भन्ने अचम्ममा पर्नु भएको छ भने कुरा पनि रोचक छ । प्रियंका कार्कीले आफ्नी छोरीको आयकां कार्की जोशीको नाममा इन्टाग्राम एकाउन्ट खोलिन् जसलाई केहि समयमा नै निकै हजारले फलो गरे । त्यहि देखेर चकित भएकाहरुले आयकां कार्की जोशीको इन्स्टाग्राम फलोअरलाई नेपाली क्रिकेटका क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लको फलोअरसँग तुलना गरेर फेसबुक पेजमा राखे । तुलना गरेर राखिएको तस्विरमा देखिन्थ्यो कि आयकांको भन्दा निकै कम फलोअर थियो मल्लको ।
भर्खरै जन्मिएकी बालिकाले नेपाली क्रिकेटमा त्यत्रो लामो योगदान भएका क्याप्टेनलाई जित्नु वास्तवममै अनौठो थियो । आयांकाको इन्स्टाबाट दुई जनालाई फलो गरिएको छ भने जम्मा ४ वटा पोस्ट गरिएको छ तर क्याप्टेन मल्लको इन्टामा ५९ वटा पोस्ट हुँदा उनी स्वयमले १४० जनालाई फलो गरेका छन् । तर आयकांलाई फलो गर्नेको संख्या १० हजार पुग्दा ज्ञानेन्द्रलाई फलो गर्नेहरु ६ हजारमात्रै थिए । मतलब, खोलेको केहि समयमा नै मल्ल भन्दा निकै धेरै फलोअर भइसकेका थिए ।
यो कुरा जब फेसबुक पेजमा बाहिरियो तब मानिसहरुले अनौठो माने । अनि यसबाट ज्ञानेन्द्र मल्लको योगदानको उचित कदर नभएको जस्तो मानियो सायद । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र मल्लका फलोअरहरु थपिन थाले । यो समाचार तयार पार्दा सम्म कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लका फलोअरहरु बढेर ११ हजार २ सय नाघेका छन् । अर्थात, ५ हजार फलोअर बढेर पहिले भन्दा झन्डै दोब्बर फलोअर हुन पुगेका छन् । यो सबै प्रियकां कार्कीको छोरी जन्मिएर उनको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बने पछिको कमाल हो । अनि भएन त ? प्रियंका कार्कीको छोरी जन्मिए क्रिकेट क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ललाई फाइदा !
यिनै हुन भर्खरै सबैलाई उछिन्दै गिनिज बुकमा विश्वकै अग्लीमा नाम लेखाउने महिला
पाइलट बुवाले उडाएको जहाजमा छोरीको पहिलो उडान, भिडियोले जित्यो लाखौंको मन (भावुक भिडियो हेर्नुस्)